Ugwetshiwe owabulala abashana abane | News24
Ugwetshiwe owabulala abashana abane
UMnu Ben Mbhele ekhihla isililo enkantolo ngemuva kokugwetshwa.ISITHOMBE: lethiwe makhanya
OWESILISA waseNzimangwe owabulala waqede wacwiya izicubu zomzimba zabashana bakhe abane ukhihle isililo eNkantolo yaseMgungundlovu ngoLwesibili mhla zingama-27 kuNdasa (March) emva kokugwetshwa odilikajele abane yijaji u-Adv Elizabeth Law.
UMnuz Ben Mbhele ubebhekene namacala amane okubulala abashana bakhe uLwandle Mbhele (4), uBandile Mbhele (7), uSiphindile Mbhele (9) noLwandile Mbhele (11) ngoMandulo (September) ngonyaka ophelile.
Izidumbu zale zingane zatholwa ekhaya lazo zinqunywe izindlebe futhi zinamanxeba okugwazwa.
Umsolwa walivuma icala kule nkantolo mhla zili-22 kuNdasa (March) emva kokuboshwa mhla zili-10 kuNdasa.
Esitatimendeni lapho avuma khona lama cala, umsolwa wathi wahlohlwa umngani wakhe uMnuz Sbongiseni Nyawose ukuba enze lesi sigameko. Wathi uMnuz Nyawose wamutshela ukuthi uma engathola izicubu zomuntu bazozihambisa enyangeni eThekwini ezomenza ukuthi abe isigwili. Waqhuba wathi ngemuva kwesikhathi ecabanga ngalolu daba wagcina esevumile ukwenza lezi zimanga ngokusizana nomngani wakhe uMnuz Nyawose nosagcwele amathafa.Wathi phakathi kwalezi zingane zonke ezabulawa yena wagwaza eyodwa kuphela kwathi uMnuz Nyawose yena wagwaza ezintathu wabe esesika izicubu zazo ngesikhathi sezishonile.
Lezi zicubu kuze kube yimanje azikakatholakali.
Ngesikhathi ijaji likhipha isigwebo libabaze isihluku okwabulawa ngaso lezi zingane lase lithi umsolwa wakhombisa ukungabi nawo unembeza ngesikhathi enza lama cala.
“Beniyigazi elilodwa nalezi zingane zikwethemba njengomalume nomndeni kodwa wena konke lokho wakushabalalisa ngokuthi uzibulale ngoba ufuna imali.
“Wathatha izimpilo zezingane ezincane ezingenacala ezingakwazi nokuzilwela. Kunzima ukucabanga ubuhlungu lezi zingane ezabuzwa ngemizuzu yazo yokugcina zisaphila.
“Indlela ovume ngayo lama cala iyakhombisa ukuthi wawuhlosile ukuwenza.Wawunesikhathi esingangamasonto amabili sokuthi ucabangisise lento owayivuma kumngani wakho ukuthi uzoyenza kodwa awuzange ukwenze lokho waqhubeka nalo itulo lokubulala,” kubeka lona.
Liqhube lathi umsolwa akazange adliwe ngisho nawunembeza njengoba ahamba nonina wazo izingane wayohlonza izidumbu.
Umsolwa kuthiwa waphinda wahamba waya emaphoyiseni eyocela ukuba amugcwalisele amafomu emali yomshwalense ayefake kuwo izingane ngo-R15 000 iyodwa nokwavela ukuthi umndeni wezingane ubungazi lutho ngalokho.
Kuleyomali kuthiwa umsolwa akazange akhiphe ngisho isenti ukulekelela ngezindleko zomngcwabo.
“Sifuna ukuthumela umyalezo oqinile lapha ngaphandle ukuthi amacala afana nalawa ngeke size siwabekezelele.”
UNks Phakamile Mbhele ongu-anti wezingane ezabulawa nobekhona enkantolo, uthe banelisekile ngesigwebo esinikezwe umsolwa kodwa wathi
basafuna ukwazi ukuthi izicubu zezingane zashonaphi.
“Namanje akasitsheli ukuthi wazishonisaphi izicubu zezingane ulokhu ethi zahamba nomngane wakhe.
Siyafuna ukwazi ukuthi zashonaphi ukuze sizokwazi ukuzingcwaba
nabantwana baphumule ngokuthula.
Ukumxolela khona sesamuxolela ngesikhathi ehlanza amaqiniso okokuqala ngqa kuthina njengomndeni ngoba sabona ukuthi ngeke kuze kusisize
ukudinwa ngeke kuze